Shirkadda Vietnamjet ayaa duulimaadyada Taipei, Singapore iyo Hong Kong ka bilaabeysa Da Nang
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Shirkadda Vietnamjet ayaa duulimaadyada Taipei, Singapore iyo Hong Kong ka bilaabeysa Da Nang
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Hong Kong • News • War-Saxaafadeed • Wararka Singapore • Wararka Jebinta ee Taiwan • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan • Wararka Jabinta Vietnam
Fijetjet ayaa bilaabay saddex adeeg oo isku xiraya Da Nang iyo xarumaha waaweyn ee adduunka - Taipei, Singapore iyo Hong Kong.
Wadooyinkan cusub ayaa la filayaa inay siiyaan Vietnamese iyo dalxiisayaasha caalamiga fursado ay si fudud ugu safraan oo kaliya Da Nang, magaalo xeebeedka bartamaha Vietnam, laakiin sidoo kale Indochina iyo gobolka Koonfur-bari Aasiya. Vietjet hadda waxay ka shaqeysaa 12 waddooyin caalami ah iyo kuwo gudaha ah oo taga kana soo baxa Da Nang.
Xafladaha duulimaadka ee ugu horreeyay waxaa lagu qabtay dhammaan meelaha la aaday iyadoo uu goobjoog ka ahaa Madaxweyne Ku-xigeenka Vietjet Do Xuan Quang si uu u soo dhoweeyo rakaabkii ugu horreeyay ee ka soo dagaya Da Nang International Airport kana yimid Taipei iyo Singapore. Duulimaadyadii bilowga ahaa, rakaabku waxay ku farxeen inay hadiyado qurux badan ka helaan shaqaalaha diyaaradda.
Jidka Da Nang - Taipei waxaa la sameeyaa maalin kasta laga bilaabo 19ka Diseembar 2019 iyadoo la adeegsanayo diyaarad cusub oo casri ah A320 / A321. Duulimaadku wuxuu ka amba baxayaa Da Nang 10:50 wuxuuna tagaa Taipei 14:30. Duulimaadka soo celinta wuxuu ka duulayaa Taipei 15:30 wuxuuna ku degaa Da Nang 17:30 (Dhamaan waqtiga maxaliga ah). Ku dhowaad saddex saacadood, rakaabku waxay diyaar u yihiin inay sahamiyaan Taipei - mid ka mid ah magaalooyinka ugu mashquulka badan Aasiya.
Jidka Da Nang - Singapore maalin walba waa la shaqeeyaa laga bilaabo 20ka Diseembar 2019 iyadoo duulimaadku soconayo ugu yaraan 2 saac 40 daqiiqo lugtii kasta. Duulimaadku wuxuu ka amba baxayaa Da Nang saacadu markay tahay 12:20 wuxuuna tagaa Singapore saacadu markay tahay 15:55. Duulimaadka soo celinta wuxuu ka amba baxayaa Singapore 10:50 wuxuuna ku degaa Da Nang 12:30 (Dhamaan waqtiga maxaliga ah). Vietjet hadda waxay leedahay seddex wado oo isku xira Vietnam iyo Singapore, oo ay ku jiraan Hanoi / HCMC / Da Nang - Singapore wadar ahaan wadar ahaan afar duulimaad maalintii.
Wadada Da Nang - Hong Kong waxaa la shaqeeyaa maalin kasta laga bilaabo 20ka Diseembar 2019 iyadoo duulimaadku soconayo ugu yaraan 1 saac 45 daqiiqo lugtii. Duulimaadku wuxuu ka amba baxayaa Da Nang saacadu markay tahay 12:45 wuxuuna tagaa Hong Kong saacadu markay tahay 15:30. Duulimaadka soo noqoshada wuxuu ka amba baxayaa Hong Kong saacadda 17:20 wuxuuna ku degaa Da Nang 18:05 (Dhammaan waqtiga maxalliga ah). Vietjet waxay hada ka shaqeysaa seddex waddo oo isku xira Vietnam iyo Hong Kong, oo ay ku jiraan HCMC / Phu Quoc / Da Nang - Hong Kong oo wadar ahaan wadar ahaan saddex duulimaad maalintii.
Vietjet waa bedel ciyaarta, abuurista kacaan ka jirta waaxda duulimaadyada ee Vietnam, iyadoo gacan ka geysaneysa horumarinta dhaqaalaha maxalliga ah iyo dalxiiska meelaha ay ku teedsan tahay. Diyaaradda Vietjet waxay ku rinjiyeysay midabada calanka Vietnam, midda calaamadda dalxiiska oo ku duusha heesta Hello Vietnam waxay si buuxda u meteleysaa sawirrada waddanka Vietnam, dabeecadda iyo dadka asxaabtooda ku leh shanta qaaradood. Tani waxay jareysaa in ka badan 80 dal oo caalami ah oo ku kala yaal Malaysia, China, India, Japan, South Korea, Thailand, Singapore iyo Indonesia.
Maaddaama ay tahay duulimaadka dadka, Vietjet waxay si isdaba joog ah u fureysaa dariiqyo cusub si ay fursado duulimaad oo badan ugu keento qiimo macquul ah qof walba. Iyada oo la adeegsanayo ruuxa "badbaadada, farxadda, awood u lahaanshaha iyo waqtiga dhowrista" qiyamka asaasiga ah, Vietjet waxay si sharaf leh ugu abuureysaa waayo-aragnimo duullimaad xusuus leh rakaabka diyaaraddaha cusub ee kuraasta wanaagsan leh, xulashada sagaal cunno kulul oo macaan oo ay u adeegaan shaqaalaha qolqolka quruxsan iyo saaxiibtinimada leh iyo weliba kuwa kale oo badan. adeegyo casri ah oo dheeri ah oo laga helo meheradda e-commerce.
Nolosha Cusub ee Bluefields Westmoreland Jamaica
Shaqaalaha Kaiser waxay u diyaar garoobayaan shaqo joojin berrito 7 subaxnimo:...